Amathiphu we-Great Animal Photography - LucidPix
Amathiphu we-Great Animal Photography
Izilwane zingenye yezihloko eziphambili zokuthatha izithombe, noma ngabe ziyizilwane zasendle noma izilwane ezifuywayo. Nawa amathiphu amahlanu ukukusiza uthathe izithombe zezilwane ezihamba phambili kanye nezibonelo ezikhombisa ukuthi yini esebenza kahle!
Ithiphu # 1: Gxila Esilwaneni
Kungazwakala kulula, kepha qiniseka ukuthi isihloko sakho sigxile kakhulu. Imininingwane eyengeziwe etholwe phakathi kokugxila okubukhali nokugxila okuthambile ingasiza ngempela ekwenzeni isithombe sakho sip. Uma udubula ngokukhanya okuphansi, zama ukuqiniseka ukuthi isilwane sihlala simile ngangokunokwenzeka, ukuvimbela noma yikuphi ukufiphala noma ukulahleka kwemininingwane. Ukugcina isilwane phakathi kohlaka kuzosenza isikhungo sesithombe, futhi kuqinisekisa ukuthi zonke izici zesilwane zifakiwe ekuguqulweni kwe-3D.
Icebiso # 2: Yenza Isilwane Sivelele
Thatha isithombe sesilwane sakho ngaphambi kwemuva elihlukile. Ukuba nesilwane kugqame ngemuva kungasiza ukuletha ukunaka endabeni yakho futhi kugcizelele ngempela izici noma isenzo obuhlosile. Kusebenzisa isizinda esinemibala eqinile kungaqinisekisa ukuthi isilwane asilahleki noma sihlangane sibe yimuva elisebenzayo.
Ithiphu # 3: Hlola ama-Angles ahlukile
Njengabantu, izilwane zivame ukuba “nezinhlangothi ezinhle” lapho zithathwa izithombe. Ukuhlola ama-engeli ahlukene ngenkathi uthatha isithombe sakho kungakusiza ekutholeni umbono olingana nesilwane. Ngokwesilwane eside, njengendlulamthi, ungangena emadolweni akho bese uthatha isithombe ubheke phezulu, ugcizelela izintamo zazo ezinde. Ukuthwebula isithombe usebenzisa ama-engeli asondelene nesihloko sakho kungathwebula imininingwane engeke ibonwe kusuka kuma-engeli amanye. Ukuthatha isithombe esisheshayo sebhubesi kusuka phezulu okuphakeme kungenza isithombe esihle se-3D. Le yindlela enhle yokuthwebula izici zesakhiwo nobuso besilwane noma yisiphi isilwane.
Ithiphu # 4: Thola i-Action Shot
Ukudutshulwa kwesilwane kuyindlela enhle yokuxoxa indaba ngaphakathi kwesithombe esisodwa. Ungasidonsa isithombe senja yakho sizulazula otshanini, ikati elidlala ngethoyi, izinyoni ezindizayo nokunye okuningi. Uma uthatha isithombe sesilwane sasendle, qiniseka ukuthi uyalihlonipha ibanga lesilwane futhi uhlale uphephile ngenkathi uthwebula isithombe sakho esifanele. Ukudutshulwa kwezilwane kubuye kuguqulele ezithombeni ze-3D ezithakazelisayo, ngakho-ke thatha isenzo sokudubula bese uyibeka kuhlelo lokusebenza lweLucidPix ukubona isihloko sakho sisebenza!
LucidPix UkuQalwa Kwesiqondisi Esheshayo →← Izindawo ezihamba phambili zokuvakashela e-Italy!